यी मान्छेलाई ह्वेल माछाले निल्यो अनि फेरी ३० सेकेण्डपछि थुकिदियो ! – Kavrepati
Home / रोचक / यी मान्छेलाई ह्वेल माछाले निल्यो अनि फेरी ३० सेकेण्डपछि थुकिदियो !
admin June 15, 2021	रोचक Leaveacomment 75 Views
समुद्रमा डाइभ हानिरहेका गोताखोरलाई ह्वेल माछाले निल्यो भने के होला ? सायद बाँच्ने सम्भावना समाप्त हुन्छ । तर कोही मानिस कालको मुखबाट पनि फुत्किन सफल हुँदा रहेछन् । अमेरिकामा एकजना मानिसलाई समुद्रमा ह्वेल माछाले निलेर पनि ओकलेको छ ।
एकजना व्यवसायिक गोताखोरलाई केप कोडस्थित तटीय क्षेत्रमा शुक्रबार बिहान हम्पब्याक ह्वेल माछाले निलेको थियो । ५६ वर्षका माइकल प्याकार्ड नामक ती गोताखोरलाई समुद्रमा १४ मिटरको गहिराइमा रहेको बेला ह्वेल माछाले खाएको थियो ।
पानीमुनि पौडिरहेको बेला एक्कासी केहीभित्र छिरेर अँध्यारो भएसँगै उनले आफूलाई सार्क माछाले खाएको हो कि भन्ने ठाने । सो ठाउँ धेरै सार्क पाइने ठाउँ हो । तर जीउमा कुनै दुखाई महसुस नभएको तथा सार्कको दाँतजस्तो घोचाई पनि महसुस नभएपछि उनले थाहा पाए कि उनी ह्वेलको मुखभित्र रहेको चाल पाए ।
आफूलाई ह्वेलले निल्ने कोसिस गरिरहेको थाहा पाएपछि उनलाई अब बाँच्दिन भन्ने लाग्यो । उनले आफ्नी पत्नी तथा बच्चाबच्चीलाई सम्झिए ।
झण्डै ३० सेकेण्ड जति आफू ह्वेलको मुखभित्र रहेको उनी बताउँछन् । श्वास फेर्ने मेसिनसँगै ह्वेलले उनलाई मुखभित्र हालेको हुनाले उनले ह्वेलको मुखभित्र रहँदा पनि श्वास फेर्न पाए ।
ह्वेलले आफूलाई निल्छ भन्नेमा उनी ढुक्क थिए । तर सौभाग्य, ह्वेलमाछा पानीको सतहमा आयो, टाउको हल्लायो र उनलाई बाहिर थुकिदियो ।
उनलाई तत्कालै नजिकै रहेका उनका सहकर्मीहरुले उद्दार गरे ।
ह्वेलले मुखभित्र हाल्ने र बाहिर जोडसँग थुक्ने क्रममा उनको खुट्टामा केही चोट लागेको छ ।
विज्ञका अनुसार ह्वेलले यसरी मानिसलाई मुखभित्र हालेको घटना निकै दुर्लभ हो । हम्पब्याक ह्वेल रिसाहा प्रकृतिको नहुने र माछा भन्ठानेर गोताखोरलाई मुखभित्र हालेको हुनसक्ने विज्ञको भनाइ छ । एपीन्यूजबाट
Previous ……त्यसपछि श्रीमानलाइ साइड लगाउन श्रीमतीले दिईन निम्तो
Next काठमाडौंबाट नक्कली डिएसपी पक्राउ